UGAARSIGA EE BERRIGA: SHARAXAAD FAAHFAAHSAN EE DHAMMAAN MARXALADAHA - GEEDKA BERRIGA KORAYA
Inkasta oo berriga taranku yahay mid muhiim u ah shirkadaha beeraleyda, shimbirahan ayaa si fiican ugu habboon guryaha barbaarinta.
Isla mar ahaantaana, muhiim ma aha in la gooyo adhiga oo idil oo shimbiraha shimbiraha u iibiyo, waxaa loo naqshadeeyn karaa si fudud nafta, iyadoo heleysa faa'iido wanaagsan oo ah qaabka hilibka, beerka iyo fluff.
Si kastaba ha noqotee, dad badan oo isla wakhtigaas ku fashilmaan, oo aan fahmin sababaha, waxay diidaan waxqabadyadaas.
Laakiin sababta dhabta ah waxaa laga yaabaa in ay been ka doortaan khaldan ah ee taranka ama dayactirka khalad ah ee shimbiraha.
Waanu ku ogaan doonaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sida loo abaabulo beerta ugu yar ee hoyga ah ee loogu talagalay beeraha berriga.
Noocyada ugu wax soo saarka ee berriga: waxaan u doorannaa si gaar ah codsiyadaada
Waxaa jira noocyo badan oo buste ah, waana wax fudud in la soo iibsado, tan iyo ma aha beeralay oo kaliya, laakiin sidoo kale shakhsiyaadka berriga ayaa ku hawlan iibinta ukumaha iyo goslings.
Marka aad iibsaneyso, waxa ugu muhiimsan waa in la fahmo ujeedka ujeedada aad tahay inaad u korodho: hilibka, beerka ama noocyada iftiinka ee wax soo saarka iyo helitaanka ukunta.
Aynu bilowno ugu dambeyntii. Qiimaha ugu weyn ee ay metelayaan waa dhalmo aad u dhaqso badan. Sidaa darteed, xitaa inkastoo miisaanka yar yar, shimbirahaasi waxay yeelan doonaan awood dheeri ah oo ukumo badan, iyo sidoo kale waxa lagu gartaa bacriminta sare iyo hatchability.
Kooxdan dhexdeeda waxaa lagama maarmaan ah in la kala saaro nuucyada noocan oo kale ah sida cad cad, Shiineeyska Shiinaha, Pereyaslavl, Gorky.
Wixii shimbiraha leh tiro badan oo dufan leh, waxaa ugu wanaagsan in la doorto nuucyada noocan oo kale ah Talyaaniga, Toulouse, Emden, Rinjiga. Noocyada noocyadani waxay leedahay qaabdhismeedka jidhka oo ka daata, ukunta uurka lehna waxay ku sii jirtaa heer aad u sarreeya, laakiin ma soo kobcinayaan sida ugu daran ee nooca bustey.
Waxaa jira xitaa noocyada gaarka ah ee berriga, kuwaas oo si gaar ah loogu koray beerka dufanka leh. Noocyada ugu caansan iyo wax soo saarka ee kooxdani waa Dhulgariirka Carbeed iyo Toulouse.
Sidoo kale, qoysaska, waxay badanaa jilaan oo kaliya jajabyada shimbiraha shimbirahan, ama kuwa qurxinta, kuwaas oo aan wax faa'iido ah ka helin tayada alaabooyinka, laakiin waxay u adeegaan raaxada sharraxaadda ama faa'iidada ganacsiga.
Maxuu noqonayaa Goose: ka wada hadla dhinacyada ugu muhiimsan
Shuruudaha waxa loo baahan yahay goose, badan. Laakiin marka la eego dhismaha dhismaha, waxaa lagula talinayaa in la dhigo xarigkeeda dhinaca koonfureed, gaar ahaan marka ay timaado waddamada koonfureed.
Xaalad la mid ah, haddii aad ku nooshahay koonfurta kuleylka, waxaa ugu wanaagsan in la toosiyo faraqa koonfur-galbeed ama koonfur. Waa inay jiraan dariishado iyo godado gaar ah xayawaanka, kuwaas oo sidoo kale lagu talinayaa in lagu dhigo dhinaca koonfureed.
Si aad u ilaaliso tiro badan oo shakhsiyadeed ah oo lagu taliyay in ay sameeyaan qaybaha gudahaXaaladdan oo kale, dhererka goosashada waa in la sameeyaa ugu yaraan 2 mitir.
Waa hagaag, mar horeba xusuustay tirada madaxyada, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad fiiriso cufnaanta shimbirta soo degta ee roasterka. Sidaa daraadeed, xaaladaha ugu fiicnaanta waxaa loo tixgelinayaa in ay qeybinayaan 1 qof oo aan ka yarayn 1m2 of geedka-gover ee, si kastaba ha ahaatee, gobollada kuwaas oo socodka shimbiraha waxaa la fuliyaa ku dhowaad saacad ah, qiyaastii 2-3 shimbir ayaa la gelin karaa isla goobta.
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka noocyada kala duwan ee qashinka loogu talagalay bisada
Mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee gooska waa diiran yahay. Sababtan awgeed, dhulka waa in lagu daboolaa qashin. Muuqaalkeeda waxaa lagu dooran karaa qof kasta, ka dib awoodooda u gaarka ah: caws engegan, balka dabiiciga ah ama xiirto, peat, kabaha laga sameeyo masago ama qoraxdu.
Laakiin inkasta oo nooca aysan wax muhiim ah, waxaa muhiim ah in si joogto ah loo hubiyo in uu yahay qalalan oo nadiif ah. Ha u ogolaan caaryada ama qallajinta - taasi waxay sababi kartaa cudurada xayawaankaaga.
Xeerarka aasaasiga ah ee sida loo abuuro microclimate wanaagsan ee goose
Xaaladaha heerkulka Shinni waa shimbir aad u adag oo xitaa xilliga qaboobaha ah ee ay awoodaan in ay u adkeystaan ​​joojinta hoos u dhigidda heerkulbeegga hoos ku xusan 0ºS si adag. Hase yeeshee, waa wax aan macquul aheyn in la qirto in heerkulka kulaylku uu ka hooseeyo -5 ºC, haddii kale waxay u horseedi doontaa in lagu keydiyo cayayaanka iyo shimbiraha, iyo in ay sii wiiqdo shakhsiyaadka.
Tani waxay ku xiran tahay xilliga jiilaalka, roogga goos gooska waxaa badanaa la yareeyaa iyadoo la dhisayo derbi dheeraad ah iyo buuxinta booska u dhexeeya iyada iyo kan hore oo leh caws, caws ama balka. Sidoo kale, kuleylka dabiiciga ah ee qolalka leh berriga ayaa badanaa la dhaqmaa, si kastaba ha ahaatee, fiiro gaar ah waa in la bixiyaa taxaddarrada badbaadada iyo ka hortagga dabka.
Qoyaanka hawada Tani waxay muhiim u tahay haynta berriga. Gaar ahaan, inta u dhexeysa 60 iyo 70% waa inay noqdaan tilmaamayaasha ugu fiican ee qoyaanka.
Xaqiiqdu waxay tahay marka hoos u dhigo qoyaanka ka hooseeya 50% ee shimbiruhu bilaabaan inay dareemaan wax xun, waxay bilaabaan inay ka xanaajiyaan xuubka xuubka indhaha.
Isla markaa, qoyaan aad u sarreeya oo ka badan 70%, qoyaanku wuxuu bilaabmaa inuu ku faafo roasterka - qashinka iyo darbiyada ayaa noqda qoyan, taas oo keenta faafidda caaryada iyo cudurrada kala duwan ee faafa iyo bakteeriyada.
Noocyada qolka qolka hawo. Si hawada goos gooska ah u noqoto mid joogto ah, waa lagama maarmaan in la siiyo godadka hawo-qaadashada. Waxaa la dhigaa hal dhinac oo qolka ah si aan loo diyaarin wax qorshe ah (waxay keenaan cudurrada berriga).
Sidoo kale, ikhtiyaarka ugu fiican ee habka hawada ayaa ah rakibidda tuubo pritichno-tuubo, taas oo u oggolaanaysa in aysan keli aheyn hawada cusub ee gudaha roasterka, laakiin sidoo kale siideynta hawada qoyan iyo hawada qallajisa qolka.
Xoojinta iftiiminta ee goos goos ah. Inta badan, iftiinka dabiiciga ah ee shimbiraha kuma filna, marka marka la dhiso goose, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo baahida loo qabo koronto.
Xaqiiqdu waxay tahay in shimbiraha iftiinka hooseeya ay ku badiyaan wax yar. Tani, marka laga reebo, waxay saameeysaa wax-soosaarkooda iyo ukunta. Si kastaba ha noqotee, iftiin aad u iftiimaya maaha wax faa'iido leh, maxaa yeelay waxay indhaheeda shimbiraha ah, waxay luminayaan jihayntooda, wayna isbeddeli karaan.
Sidoo kale, waxaa la aaminsan yahay in haddii laga bilaabo Janaayo waxaan bilaabeynaa in ay iftiimiso qoryaha dabiiciga ah, oo abuuraya 14 saac maalintii iftiinka, baaskiilku wuxuu bilaabi doonaa inuu duulo badan hore - dhammaadka Janaayo, bilowga Oktoobar, inkasta oo ay caadi ahaan bilaabaan ukumo-gelinta kaliya dhamaadka bisha Febraayo.
Waxaa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan cudurada of berriga.
Meelaha shimbiraha socodka: meel intee le'eg ayaad u baahan tahay berriga iyo kaydka biyaha loo baahan yahay?
Goose waa shimbir aad u firfircoon oo aan suurtagal ahayn in la xiro waqtiga oo dhan. Marka la eego arrintan - haddii aad doonayso inaad gowso, waxaad hubaal ahaan doontaa inaad ka welweliso meesha ay u socdaan.
Fikrad ahaan, waa in ay ahaato meel ballaadhan oo lagu daboolo dhirta yaryar. Waa wax aad u wanaagsan in la daajiyo berriga meelahaas oo dalagga dalaggu hore u koray, maaddaama geedo laga soo saaro hadhuudhku waxay noqon doonaan kuwo aad u faa'iido leh shimbirahaas.
Si kastaba ha ahaatee, marka laga reebo ilaha awoodaha dheeraadka ah, berriga sidoo kale waxay u baahan yihiin inay siiyaan helitaanka kaydka ama si gaar ah u diyaari balli yar oo iyaga loogu talagalay. Isla markiiba qof walba socodka shimbiraha gaar ahaan dibedda laguma talinayo, sidaas darteed, way fiicnaan doontaa inaad bixiso hoy gaar ah.
Dad badan oo beeraleyda digaaga ayaa doorbida inay dhisaan qalimaan khaas ah oo ay ku hayaan berriga xilliga gu'ga-xagaaga. Qalab sidan oo kale ah, waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo derbiyada dhoobo dhoobo ah; meeshii sidan oo kale ahna waa lagama maarmaan in la siiyo shimbiraha helitaanka biyaha.
Waxaan u maleyneynaa cuntada saxda ah ee xayawaanka aad xayawaanka ah.
Waxaa la rumeysan yahay in raashinka ugu wanaagsan ee berriga xilliga guga iyo xagaaga ay daaqsanyihiin cawska. Isticmaalka cawska cusub ayaa saameyn aad u wanaagsan ku leh caafimaadka shimbiraha iyo sida ugu dhakhsaha badan ay u heli doonaan dufan badan.
Caveat kaliya - cawska cagaaran leh dhar ma la cuni karaa in berriga, kuwaas oo aan weli gaarin da'da saddex toddobaad. Dhirta, ugu nafaqo leh ee berriga waa digiraha, kaas oo lagu beeray karaa iyo gaar ahaan.
Haddii aad ku siin karto xayawaankaaga shuruudaha la midka ah, markaa waxaad u baahan doontaa inaad ku quudiso hal mar maalintii (doorbidid fiidkii), adigoo isticmaalaya miro iyo qudaar oo keliya. Wixii kala duwan, berriga ayaa sidoo kale la siin karaa caleemo kaabajka cusub, cawska lowska, nettles, iyaga oo badalaya noocyo kala duwan oo firileyaal kala duwan.
Haddii bacaha lagu hayo qalimaan xiran, markaa waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo cagaarka iyaga u gaar ah, maaddaama ay saameyn togan ku leedahay hababka dheef-shiidka. Ku quudinta sidoo kale waxay leeyihiin xoogaa si tartiib ah, doorbidayaa 3 jeer maalintii. Waxaa habboon in la fiiriyo xaqiiqda ah in berriga laga dhigi karo miiska aan cabsi lahayn.
Xilliga jiilaalka, cuntada waa in la dhammaystiraa, maadaama ay shimbiruhu aaney iyagu u heli karin. Inta ugu fiican iyaga ku quudiya 3 jeer maalintii (dambe waa inay ahaataa saacad ka hor qorraxda hoos u dhacdo).
Waqtigaan, berriga waxaa la quudiyaa khudaarta cagaaran, qaxwaha, digirta iyo badarka. Dherirka iyo xayawaanka xooluhu waxay yeelan doonaan saameyn togan oo ku saabsan miisaanka nool.
Cunto noocee ah ayay dhallinyaradu u baahan yihiin waana in laga saaraa inta ka hartay berriga?
Goslings oo keliya ayaa cuni kari waaya cunnooyinka adag, sidaas darteed, illaa ay gaaraan hal bil oo da'da ah, way ka fiicnaaneysaa in ay kala soocaan oo ay sameeyaan cunto gaar ah. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo isku darka gaar ah ee maaddooyinka soo socda:
Ukunta la karkariyey.
Suufiyada qamadiga ah ee sarreenka ah / digirta / miro / ari.
Marka hore, dhuubashada ayaa la quudiyaa 7 jeer maalintii, laakiin ilaa ay gaaraan da'da hal bil, tirada naasku waa la dhimayaa ilaa 3. biyaha lagu dhuuqo biyo la karkariyey, taas oo aad u baahan tahay in aad qallajiso qadar yar oo manganese ah.
Waxa kale oo xiiso leh inaad ka akhrido dhismaha guri leh gacmahaaga.
Noocyada quudinta boodada
Shuruudaha aasaasiga ah ee quudinta xoolaha waa kuwo fudud: ugu yar yar ee quudinta iyo fududaanta fudud. Waxay u fiicantahay inaad adigu sameysid, gaar ahaan haddii aadan ku jirin tiro badan oo shaqsiyaad ah.
Wax kasta oo ah, labada guddoomiye, iyo jilbaha, iyo qaybo ka mid ah duubka biraha ayaa ku habboon tan. Waxa kaliya ee muhiim u ah in la tixgeliyo waa in horey u quudinta qofkii shakhsi ahaan waa inuu ahaadaa ugu yaraan 15 sentimitir.
Qaybinta nuujiyeyaasha ku jira faras-goosare ama qalin waa muhiim in la diyaariyo si ay berriga u cunaan midba midka kale marka ay wax cunayaan, laakiin sidoo kale waxay la xiriiraan naas-nuujiyeyaasha oo dhan waqti isku mid ah. Gaar ahaan qashinka macdanta, taas oo ah, quraarad, dhagaxyada iyo qolofka, qaybaha gaarka ah ayaa loo sameeyaa si aanay u qasmin.
Inta badan quudiyayaasha waxaa la qabadsiiyaa ilaa 20 sentimitir oo kor ka ah dabaqa, iyo quudinta biyaabaha cagaaran ee ay isticmaalaan xannaaneeyayaasha xannaanada.
Doorashada khamriga ee goose
Caanaha wax lagu cabbo ayaa sidoo kale kala duwanaan kara: waxaad isticmaali kartaa labadii guri ee guriga iyo kuwa la iibsaday.
Waxa kaliya oo muhiim ah in aan loo oggolaan qashinka inuu qoyan yahay qoyaanka gawaarida, sidaas darteed, taargooyinka waawayn waxaa badanaa lagu dhejiyaa meel hoose oo biyo ah.
Xilliga jiilaalka, biyuhu waxay si joogto ah u xakameynayaan, sidaa daraadeed cabitaanada waxaa lagula talinayaa inay diirimaad ama kululaan ku shubaan biyo kulul.
Bixinta haramaynta isticmaalka qoob-ka-iyo-qaboojinta: faa'iidooyinka iyo faa'iido-darrada
U sheeg sida ugu habboon ee loo abuuri karo caruusadda cusub goosashada way adag tahay. Faa'iidada keliya ee ku-oolka ah waa in ay u mahad naqeysaa, waxaad si simultane u keeni kartaa nalka tiro badan oo ah xayawaanka yar yar. Sidaa darteed, caruur dhalinyaro ah ayaa aad u fududaanaya inay koraan, maaddaama dhammaan gogosha ay isku da'da yihiin.
Sidoo kale, marka la isticmaalo kuleylaha, ma jirto halis ah in lakulo farcanimada sababtoo ah kormeerka ukumaha laftiisa. Si kastaba ha noqotee, si aad u hesho dhammaan faa'iidooyinkaas, waxaad u baahan tahay inaad soo iibsato kiniisad, oo waxay ku kacdaa lacag, halka baroorashadu yihiin ikhtiyaarka ugu dhaqaalaha badan.
Dabeecadda dabiiciga ah ee cayayaanka goose
Goose waxay inta badan diyaarisaa buulka laftiisa, iyo xaqiiqda ah in ay diyaar u tahay in la gooyo ukunta waxaa lagu fahmi karaa adigoo soo jiidaya baalasha ka soo laabta laabta, kaas oo goos gooshihiisa buulkeedii. Hal mar ayaa badanaaba fariisan kara wax ka badan 12-15 ukumood.
Sidoo kale, waa mid aad u muhiim ah in kursiga lagu fadhiisto meelo kala duwan ama si loo hubiyo in aysan arkin dhammaan waqtigan. Haddii kale, waxay noqon doonaan dareen, waxay isku dayi karaan inay waxyeeleeyaan ukumaha kale.
Goslings waxay ku muuqdaan xaalado dabiici ah 28-30 cisho kadib. Dabcan, muddadani way kala duwanaan kartaa 1-3 maalmood, taas oo ku xirnaan doonta qaboojinta ukunta. Marka cirbadaha ay bilaabaan inay dillaacaan, waxaa muhiim ah in hen uusan ka tagin buulka ka hor ilaa inta ay guursadeen dhamaan. Si wax looga qabto nidaamkaan laguma talinayo.
Kala dhigo ukumo kulul
Hannaanka qaboojinta berriga waxay socotaa 27-32 maalmood. Isla mar ahaantaana, ilaa heerkulka, heerkulka heerkulka 37.6-37.8 º waxaa lagu hayaa kuleylaha 26 maalmood, iyo qoyaanka heerka 60%. Laakiin hadda waa in si toos ah loogu dhejiyo gogosha, heerkulku waa in yar la yareeyo ilaa 37.3-37.5 º, iyo qoyaanka hawada, dhanka kale, waa in kor loo qaado 80%.
Iyada oo sidoo kale bukaanka caynkan oo kale ah ayaa sidoo kale u baahan waqti go'an qaboojinta ukumahataas oo ay ku jirto khafiifinta iyaga oo biyo ku buufinaya:
Toddobaadka ugu horeeya looma baahna;
Laga bilaabo 8 ilaa 18 maalmood ukumo ayaa la qaboojiyey 2 jeer 10 daqiiqo;
Laga bilaabo 19 illaa 24 maalmood - sidoo kale 2 jeer, laakiin horeba 20 daqiiqo;
Laga bilaabo 25 illaa 27 maalin -2 jeer 30 daqiiqo;
Intii lagu guda jiro 27 ilaa 29 maalmood, 2 jeer oo dheeraad ah 30 daqiiqo.
Ukumaha iftiinka leh ayaa la qabtaa maalinta 10aad iyo 27aad ee joogitaankooda, iyo sidoo kale marka ay u socdaan maalinta 27aad.
Xeerarka lagu kobcinayo ama sida loo hirgeliyo berriga wanaagsan
Waxaan hore u soo sheegnay sida loo quudiyo gogosha yar. Hadda waxaan kuu sheegeynaa wax yar oo ku saabsan shuruudaha ay tahay in lagu hayo bilaha ugu horreeya nolosha.
Gaar ahaan, usbuuca ugu horreeya dhererka waxaa lagu hayaa heerkul ah 30 ºC waxayna sidoo kale bixisaa iftiin saacad ah. Markuu yahay 20 cisho, heerkulka waa in la dhimo ilaa 20ºS.
Haddii ay si dabiici ah u koraan, waalidiintu waxay siin doonaan jiilka dhalinyarada leh daryeelkan dhammaystiran. Waxa kaliya ee loo baahan yahay in la sameeyo waa inay si joogto ah u siiyaan cunto iyo biyo ay u baahan yihiin si ay u nadiifiyaan marinka sanka.
Horeba laga soo bilaabo 10-12 goslings ayaa loo sii deyn karaa socodka, inkastoo ay khatar badan tahay. Dhinaca kale, waxaanu siinnaa horumarin deg-deg ah oo wax ku ool ah oo ku habboon deegaanka dibadda, iyo dhinaca kale, waxaan halis ugu jirnaa inay noqdaan wax lagu cuno. Iyadoo socon joogto ah oo cawska, goslings ayaa si tartiib tartiib ah loo wareejiyo quudinta habeenkii ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Geedka berriga koraya 2019